Glass ကို Coating ပြုလုပ်မီနှင့်ပြီးနောက် China Manufacturers & Suppliers & Factory
Glass ကို Coating ပြုလုပ်မီနှင့်ပြီးနောက် - တရုတ်ထံမှထုတ်လုပ်သူ, စက်ရုံ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း
( 24 များအတွက်စုစုပေါင်း Glass ကို Coating ပြုလုပ်မီနှင့်ပြီးနောက် ထုတ်ကုန်များ)
Rainproof Glass ကို Coating အော်တို
စူပါ Hydrophobic Rainproof အေးဂျင့်လက်ခဏာ: စူပါ hydrophobic, ရှင်းရှင်းလင်းလင်းရူပါရုံကို ကုန်ပစ္စည်း Features: ကားရဲ့ရှေ့နှင့်နောက်ဖန်ခွက်တွင်အသုံးပြုသည်ထိုသို့သောကြာရွက်အဖြစ်နောက်ကြည့်မှန် rainproof, စူပါခိုင်မာတဲ့ hydrophobic သတ္တိလည်းရှိတယ်။ ဒီထုတ်ကုန်, ဤကုန်ပစ္စည်းအပေါ်တစ်ဦးခြစ်-ခံနိုင်ရည်အလွှာ silicon.Forming...
ဒေတာများကိုအလယ်ဗဟိုဆာဗာ TUWF-610 ရေခဲသေတ္တာ
ဒေတာများကိုအလယ်ဗဟိုဆာဗာ TUWF-610 ရေခဲသေတ္တာ ဒေတာစင်တာဆာဗာများအတွက်အသုံးပြုသောနစ်မြုပ်အဆင့်ပြောင်းလဲမှုကိုအရည်အအေး, လေအေးပေးစက်အအေးမလိုအပ်ပါဘူး အရာသည်အလွန်ကွန်ပျူတာအခန်း၏ပါဝါစားသုံးမှုလျော့နည်းစေသည်။ အဆိုပါ dielectric အပေါ်ယံပိုင်း၏ဝိသေသ: * Container DATA Centre တည်ဆောက်မည်ဆာဗာ inertia...
ဂီယာအုံများအတွက် non-မီးလောင်လွယ် Dielectric Coating ရေခဲသေတ္တာ
ဂီယာအုံများအတွက် TUWF-47 က Non-မီးလောင်လွယ် Dielectric Coating ရေခဲသေတ္တာ ဓာတုအမည်: Perfluorohexene ယေဘုယျအားဖြင့်စွယ်များနှင့် helical ဂီယာများအတွက် enclosing box ရဲ့မျက်နှာပြင်ဧရိယာလူစုခွဲရန်လုံလောက်သောထက်ပို ဓါတ်ရောင်ခြည်, convection နှင့် conduction နေဖြင့်ဒေသခံပတ်ဝန်းကျင်ဖို့အပူ။ ......
ကုန်ပစ္စည်းအမည်: လက်သန့်ရှင်းဆေး အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်: 500ml သောက်သုံးသောပုံစံ: ဂျယ် အဓိကတက်ကြွသောပါဝင်ပစ္စည်းများနှင့်ပါဝင်မှု - 70-75% ethanol glycerin အသုံးပြုသူများ - လူကြီးများနှင့်ကလေးများ အသုံးပြုမှုနယ်ပယ် - လက်အရေပြားသန့်ရှင်းရေး၊ ဘက်တီးရီးယားနှင့်သူနာပြုများအတွက်ဖြစ်သည် အမွှေးအကြိုင်: Multiple fragrance...
လေရဟတ်တာဘိုင် Generator ကို 47 ဒီဂရီ Dielectric Coating အလတ်စားစီးရီးအေး Fluorocarbon, အရာမူထူးခြားတဲ့ Perfluorinated အရည်တ္ထုများဖြစ်ကြသည် မြင့်မားသော dielectric စဉ်ဆက်မပြတ်, စံပြဓာတု inertia, အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့အပူစီးကူးခြင်းနှင့်ကောင်းသောများ စနစ်ကလိုက်ဖက်မှု,...
Container DATA Centre တည်ဆောက်မည်ဆာဗာများအတွက် Dielectric Coating အေးနစ်မြုပ် ဓာတုအမည်: Perfluorohexen င Air ကိုအပူနစ်မြုပ်အများဆုံး throughput ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့အပူကိုင်တွယ်ရန်ရုန်းကန်။ သာ. ကြီးမြတ်အောင်းနေချိန်နှင့်အောက်ပိုင်းတစ်ခုလုံး throughput အတွက်ထိန်သိမ်းထုရလဒ်များကိုလျှော့ချ။...
အင်ဗာ Controller များအတွက် TUWF-47 က Non-မီးလောင်လွယ် Coating
အင်ဗာ Controller များအတွက် TUWF-47 က Non-မီးလောင်လွယ် Coating Fluorocarbon အေးအလတ်စားစီးရီး, အရာ Perfluorinated အရည်တ္ထုများဖြစ်ကြသည် မြင့်မားသော dielectric စဉ်ဆက်မပြတ်ရှိသည်။ အဆိုပါအင်ဗာ Controller ၏အပူ-General ၏အအေးပေး စံပြဓာတုအာဂွန်,...
ခြစ်ရာကိုကာကွယ်ရန် Car Liquid Spray Crystal ဖယောင်းပြား
Crystal ဖယောင်းဝိသေသလက္ခဏာများ: တောက်ပ။ ချောမွေ့သော၊ အစွန်းအထင်းများနှင့်ခြစ်ရာများကိုကာကွယ်ပေးနိုင်သည်။ ကုန်ပစ္စည်း၏အင်္ဂါရပ်များ: ဤထုတ်ကုန်သည်မော်တော်ယာဉ်ဆေးသုတ်ပြုပြင်ခြင်းတွင်အသုံးပြုသည်။ တောက်ပမှု၊ ခိုင်မာသော၊ အစွန်းအထင်းနှင့်ခြစ်ရာကိုကာကွယ်ခြင်း၊ အလွန်ချောမွေ့သော၊...
အစွန်းအကွက်များနှင့်ခြစ်ရာကိုကာကွယ်ပေးနိုင်သည့်ကား Crystal Wax Plating
Car Rearview Mirror Glass Siding Glass မိုးရေခံပစ္စည်း
စူပါ Hydrophobic မိုးရေခံအေးဂျင့် ဝိသေသလက္ခဏာများ: စူပါ hydrophobic, ရှင်းရှင်းလင်းလင်းရူပါရုံကို ကုန်ပစ္စည်း၏အင်္ဂါရပ်များ: ဤထုတ်ကုန်ကိုကား၏ရှေ့နှင့်နောက်ဖန်ခွက်များတွင်အသုံးပြုသည်။ မှန်နောက်ဘက်မှန်၌မိုးရေစိုခံသည်။ ဥပမာကြာပန်းအရွက်သည်စူပါအားကောင်းသော hydrophobic ဂုဏ်သတ္တိများရှိသည်။...
Window အတွက် Fog Spray Glass Rainproof အေးဂျင့်
120ml Window Glass အတွက်ရေစိုခံသည့်ရေစိုခံအေးဂျင့်မှုန်ရေမွှား
စူပါ Hydrophobic မိုးရေခံအေးဂျင့် ဝိသေသလက္ခဏာများ: စူပါ hydrophobic, ရှင်းရှင်းလင်းလင်းရူပါရုံကို ကုန်ပစ္စည်း၏အင်္ဂါရပ်များ: ဤထုတ်ကုန်ကိုကား၏ရှေ့နှင့်နောက်ဖန်ခွက်များတွင်အသုံးပြုသည်။ မှန်နောက်ဘက်မှန်၌မိုးရေစိုခံသည်။ ကြာပန်းအရွက်ကဲ့သို့သောပြင်းထန်သော hydrophobic ဂုဏ်သတ္တိများရှိသည်။...
ခြစ်ရာများကိုခံနိုင်ရည်ရှိသော Layer Glass Rainproof Agent
စူပါ Hydrophobic Glass ကို Rainproof အေးဂျင့်
nano ကား Glass ကို Hydrophobic Coating Rainproof အေးဂျင့်
တပ်ဦး Window ဘို့ရေကိုတွန်းလှန် Glass ကို rainproof အေးဂျင့်
ကားတစ်စီးကားရှေ့မှနျ Glass ကို Rainproof အေးဂျင့်
အော်တိုစောင့်ရှောက်မှုကား Crystal ဖယောင်းရုပ်ပန်းကန်အမျိုးအနွယ်ကိုဖယောင်း
1 ။ 120ML ပြည်ထဲရေးဆပ်ပြာလက်ခဏာ: ထိရောက်စွာခေါင်းမာအစွန်းအထင်းကိုဖယ်ရှားလိုက်ပါ။ ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့သဟဇာတစတော့ရှယ်ယာဖြေရှင်းချက်, ရေ-based ပုံသေနည်း။ 2.Product အင်္ဂါရပ်များ: ဒီကားစောင့်ရှောက်မှုထုတ်ကုန်မော်တော်ကားပလပ်စတစ်အစိတ်အပိုင်းများနှင့်သားရေပေါ်မှာအကောင်းတစ်သန့်ရှင်းရေးအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်,...
leather ထိုင်ခုံ Cleaner ပြည်ထဲရေးဆပ်ပြာ Coating 120ml
အစားထိုးပလပ်စတစ်အကာအကွယ်ရုပ်ရှင်မျက်နှာပြင် Shield ကို
Flip-up ဖြင့်ချိန်ညှိနိုင်သောလုံခြုံစိတ်ချရသောမျက်နှာအကာအရံမျက်နှာမျက်နှာပြင် မျက်နှာဖုံးသည်မျက်လုံးမျက်နှာဖုံးထက်အကာအကွယ်ပေးသောflyingရိယာသည်ပျံတတ်သောအမြှုပ်များကိုကာကွယ်ရန်ပိုကောင်းသည်။ မျက်နှာဖုံးများ၏စာရင်းသည်မလုံလောက်ပါ။ လူတစ် ဦး ကိုအကြိမ်များစွာအသုံးပြုရန်လိုအပ်ပြီး၊ ဘတ်စ်ကားတစ်စီး၊ မြေအောက်ရထား၊...
500ml Lavender လက်သန့်ရှင်းဆေးရောင်းသူ
ရေခဲသေတ္တာများအတွက် Fluorocarbon ရေခဲသေတ္တာအေး
Glass ကို Coating ပြုလုပ်မီနှင့်ပြီးနောက် Glass ကို Coating ရုပ်ရှင်ပွဲတော် Glass ကို Coating ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး Glass ကို Coating Paint ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး Glass ကို Coating လုပ်ငန်းစဉ် Glass ကို Coating ဘေးထွက်သက်ရောက်မှု Glass ကို Coating န်ဆောင်မှုများ Glass ကို Coating ကောင်းကျိုးများ